Shidaal yari wali jirta oo walwal ku haysa Somaliland. - Wargeyska Faafiye
Home 2014 September 24 .Warka Shidaal yari wali jirta oo walwal ku haysa Somaliland.
Darawalada gobalka Somaliland ayaa ka cabanaya arimo ku saabsan sicir bararka qiimaha shidaalkakadib markii laba markab oo la sugayay in ay ku soo xidhaan magalada dekadda ah ee Berbera bishii hore badhtamaheedii aysan ilaa iyo hadda imaanin.
Shaqaale Yuusuf, oo 31 jir ah oo taksiille ka ah Hargeysa, ayaa sheegay in shidaal yarida iyo sicir bararka ay labadii usbuuc ee ugu dambeeyay dhibaato wayn u gaysteen marmarka qaarkoodna ay ka dhigeen in uusan shaqaysan karin.
Ilaa iyo markii shidaal yaridan ay bilaabatay, waxay noqotay in uu habeenkii gaadhiga waddada uga tago, kadib markii uu ilaa toban xarumo shidaal tagay oo uu shidaal ka waayay, marmarka qaarkoodna uu guriga joogay oo uusan shaqo aadan sicir bararka dartiis, ayuu yidhi,
Qiimaha shidaalka ayaa kala gaddisan guud ahaan, laakiinse kaalimaha shidaalka ayaa qiimaha halkii litir ee ahaa $1 gaadhsiiyay $1.40 labadii usbuuc ee la soo dhaafay, ayuu yidhi, isaga oo intaas ku daray in tiro darawaliin tagaasiilay ah ay shaqadii joojiyeen sababo la xidhiidha sicirka dartiis.
Si uu u awoodo in uu shidaalka iibsado, uuna u sii shaqeeyo, ayuu Yuusuf sheegay in uu ku khasbanaaday in uu macaamiishiisa iyagana lacagta ku kordhiyo. “Tani waxay keentay in dad badan [oo tagsiyada isticmaali jiray] ay awoodi wayaaan in ay iska bixiyaan, qaar macaamiishayda ahna wayba iska daayeen in ay tagsiyada isticmaalaan,” ayuu yidhi.
Inta aysan shidaal yaridan dhicin, ayaa waxa uu samayn jiray inta u dhaxaysa $40 ilaa $60 doolar maalintii, laakiinse hadda maalinta aadka u fiican haddii uu sameeyo $20 ayuu aad u fiican yahay, ayuu yidhi.
Sidoo kale, ayaa Cabdinuur Maxamed Cusmaan, oo ah darawal gaadhi dhawr iyo toban qaad ah wada oo ka shaqeeya inta u dhaxaysa Hargaysa, Berbera iyo Burco, ayaa sheegay in uusan helin hal qof oo rakaab ah ilaa iyo dhamaadkii bishii August. Wuxuu sheegay in aysan macno samaynaynin in uu shaqeeyo sababta oo ah “lacagta aan sameeyo oo dhan waxay noqonaysaa oo kaliya shidaalka”.
Dhiniciisa, ayaa Sulaymaan Siciid Cali oo ah Guddoomiyaha Kaydka Shidaalka Berbera oo ay dawladdu leedahay ayaa qiray in shidaal yari ay jirto, laakiinse dawladda aan lagu eedayn karin.
“Dawladdu shidaal ma soo dhoofsato, kaalintaanaduna waa in aan meel kayd ah u diyaarino shirkadaha shidaalka keena,” Cali ayaa Sabahi u sheegay. “[Iyagana] kaydkoodii ayaa dhamaaday, sidaas darteed shidaal yaridu waxay ka imaanaysaa shirkadaha shidaalka soo dajista.”
Arrimaha ka dhalanaya shidaal yarida ayaa yimid kadib markii laba markab oo la sugayay in ay Berbera ku soo xidhaan badhtamihii August aysan imaanin, Maxamed Shukri Jaamac oo ah Madaxa Rugta Ganacsiga Somaliland ayaa sidaas yidhi.
Si shidaalka loo sii qaybiyo, ayaa Wasaarada Ganacsiga, maamulayaasha xarumaha kayda ee dawladdu ay leedahay iyo shirkadaha shidaalka keena ay isku waafaqeen in si tartiib tartiib ah ama si saami ah ay shidaalka yaala u qaybiyaan, xarun shidaal oo kastana la siiyo 20 fuusto ilaa iyo inta shidaal kale uu ka imaanayo, ayuu yidhi.
“Mar alla markii laga hadlo shidaal yarida, ayaa qof walba wuxuu doonayaa in uu iibsado [in ka badan] waxa uu u bahaan yahay. Sidaas darteed, ayaa [xarumaha] shidaalka iibiya loo sheegay in ay si saami ah shidaalka ku iibiyaan oo gaadhi walba ay ugu badnaan 10 litir ka iibiyaan,” ayuu yidhi.
In si saami ah loo qaybiyo shidaalka ayaa waxaa la sugayay dhamaadkii Jimcihii hore (September 5-teedii) iyada oo la sugayay in uu yimaado markab shidaal wada oo ka imaanayay Isutagga Imaaraadka Carabta, laakiinse subaxii Arbacada (September 10-keedii) ayaa madaxdu waxay sheegen in markabkii uusan wali soo gaadhin Somaliland.
Dhibaatooyinka ka imaanaya soo dhoofsashada iyo kaydinta shidaalka
Yaasiin Calase, oo maamulka ganacsiga ka dhiga Jaamacada Hargeysa, ayaa sheegay in dawladda ay tahay in ay dib u fiiriso habka shidaalka lagu soo dhoofsado si ay u xaqiijiso in shidaal yari danbe aysan dhicin.
“Marka qiimaha [shidaalku] uu kor u kaco, ayaa sidoo kale qiimaha [alaabta iyo khidmooyinkuba] ay kor u kacayaan, taas oo sababaysa sicir barar iyo in qofka mushaharkiisu uusan [nolol maalmeedkiisa] ku filayn,” ayuu yidhi. “Arintaasna qof walba oo Somaliland jooga ayay saamaynaysaa.”
In kasta oo in ganacsiga ay dawladu faraha kala baxdo ay guud ahaan kaalmaysay in dhaqaaluhu uu kor u kaco, khidmooyinkuna si fiican ku socdaan, ayuu yidhi, ayaa haddana ay tahay in dawlad gobaleedku gacanta ku hayso meelaha muhiimka ah sida waaxda tamarta, ayna ku fikirto iskaashi dhinaca dawlada iyo waaxda khaaska ah si aad loola socdo shirkadaha shidaalka soo dhoofsada.
Lix shirkadood oo si khaas ah loo leeyahay oo kaliya ayaa ganacsi shidaal dhoofis ah ka sameeya Somaliland.
“Dawladda ayay tahay in 20% ay lahaato [shirkadaha] shidaalka keena,” Calase ayaa sidaas sheegay, isaga oo intaas ku daray in ay tahay in shirkadahaas si fiican loo baadho si loo xaqiijiyo in ay maaliyad ahaan awoodi karaan dalabka suuqa iyo shaqada la rabo in la qabto.
Intaas waxaa dheer, ayuu yidhi, waa in dawladdu ay kordhiso taangiyada shidaalka lagu kaydiyo sababta oo ah dalabka maanta ee suuqa waxa uu ka badan yahay markii xarumaha kaydka la dhisay.
Hadda, markii la fiiriyo tirada kooban ee taangiyada shidaalka lagu kaydiyo, ayaa shirkaduhu ay shidaalka u keenaan si tookaysi ah iyaga oo ku socda wakhti ay u dajisay Wasaarada Ganacsiga, Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Jaamac ayaa sidaas sheegay.
Wal wal ka taagan sicir isbadalka
Si kastaba ha ahaatee, darawaladii ay Sabahi la hadashay ayaa sheegay in ay ka walwalsan yihiin in scirka shidaalku uusan ku noqon doonin intii uu markii hore ahaa xataa haddii shirkaduhu ay shidaal ku filan keenaan, shidaal yaraantuna ay meesha ka baxdo.
“Toddobadii sano ee ugu danbaysay, waxaan khibrad fiican ka helnay sicirka is badbadalaya,” ayuu yidhi Cusmaan, oo ah darawal bas. “Markii la fiiriyo Somaliland waligeed ma dhicin in sicirku uu hoos u soo dhaco markii uu kor u kaco kadib.”
Haddii aysan dawladda Somaliland arrintan wax ka qabanin, qiimaha sicir bararka ayaa ganacsiga dhaawici doona si aan fiicnayna u saamayn doona nolosha shacabka, Yuusuf oo ah tagsiille ah ayaa sidaas sheegay.
Cal,i oo ah guddoomiyaha kaydka shidaalka ee Berbera, ayaa sheegay in sicirka halkii foosto oo gaas ah uu yahay $185 doolar, halka naaftaduna tahay $175 doolar.
“Arintaasi isma baddalin, kororka [qiimaha shidaalkuna] waxa uu ka imaanayaa kaalimaha ee ma aha arrin khusaysa kordhinta shirkadaha shidaalka keena,” ayuu yidhi.
Dawladda ayaa la socota qiimaha ay shirkadaha wax soo dhoofiya uga iibiyaan kaalimaha shidaalka, Cali ayaa sidaas sheegay, laakiinse waxay xakamayn wayday qiimaha ay xarumahaas macaamiishooda shidaalka uga iibinayaan.
Dad ku dhintay shil baabuur.
Askari kufsi ku kacay oo 10 sano lagu xukumay
DOWLADA MAREEYKANKA OO WEERARTAY AL-SHABAAB
Saado Cali Warsame Oo Ku Dhaawacantay Shil Gaari.
Couple Sentenced For Having Sex In Police Car